Falanqeynta kulanka xiisaha leh ee Manchester City Vs Stoke. Iyo Pep oo dib u helaaya adeega Aguero.
Tuesday, December 18th, 2018 - 22:30:04
Saturday October 14, 2017 - 10:30:53 in Wararka by Ow zebio
Kulanka Manchester City Vs Stock City Premier Leuge.
Sergio Aguero ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro kulanka Maanta Kooxdiisa Man City ay marti sooreeyso dhigeeda Stoke , laba isbuuc ayuu xanuun uu ku maqnaa kadib markii uu galay shil gaari, ayuu yiri tababaraha Manchester Pep Guardiola.
29 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa la filayay inuu maqnaan doono dhowr isbuuc ka dib markii uu shil ku galay magalada Amsterdam 29kii September.
Laakiin weeraryahanka reer Argentina ayaa tababarka buuxa qaatay maalintii Khamiistii, "shaqo fiican ayuu qabtay," sida laga soo xigtay macalinka City Pep Gardiola.
Markii la weydiiyay hadii Kun Aguero uu ciyaari karo,Guardiola ayaa yiri: "Laga yaabee, ma ahan 100% laakiin waa uu soo kabsaday."
Fabian Delph ayaa shaki uu ku jiraa taam ahaanshihiisa kulankaan sababtoo ah dhibaato muruqa ah ayuu uu qabaa ,inkastoo uu sidoo kale ku soo laabtay tababarka, dhanka kale kabtan Vincent Kompany ayaa weli dhaawac ku maqan.
Stoke ayaa waxaa ka maqan Joe Allen kaasoo dhaawac kasoo gaaray kulankii xulkiisa Wales ee ay la ciyaareen Republic Of Ireland isreebreebka Koobka Adduunka.
Daafacyada Stock City Captain Ryan Shawcross iyo Bruno Martins Indi ayaan u badneyn inay ciyaaraan kulankaan sababtoo ah dhaawac Ayeey qabaan.
Xaqiiqooyinka Kulankaan Manchester City Vs Stock City.
Stoke City ayaa badisay kaliya hal kulan oo Qura sagaalkii kulan ee ugu danbeysay horyaalka Premier League ah oo ay booqdeen Garoonka Etihad Stadium waxa Ay kolkaa Ay taraiiqdu ahayd bishii August sanadii 2014-ka oo ay ku guuleysateen gool uu ansixiyay Mame Biram Diouf oo daqiiqadii 70-jnaad dhamaadkii ciyaarta.
Manchester City ayaa dhalisay afar gool qeybtii hore lixdii kulan ee ugu dambeysay ee ay ciyaareen, lakiin waxa ay ku guuldareysteen inay shabaqa soo taabtaan seddexda kale.
Stoke ayaa maanka ku heeysa in markii ugu horeeysay Ay shabaqeeda ka ilaashato Manchester City kuwaas Oo heeysta weerar halos ahi.
Maxaa U Gaara Manchester City:
Hogaamiyaasha Horyaalka Premier Leuge dalka England ayaa waxaa laga adkaan 19 kulan oo aan looga badin garoonkooda tartamada oo dhan (W13, D6).
Manchester City ayaa badisay shan kulan oo isku xigta Premier League, waxaana ay badisay 15 kulan oo aan laga badinin tartankaan Preimer Leuge (W12, D3).
Kooxda Pep Guardiola ayaa 5-0 ku badisay mid kasta oo ka mid ah labadii kulan ee ugu danbeysay ee ay ciyaaraan Preimer Leuge hubaalna Waa Waa Kooxaha ugu cad cad hanashaday horyaalkaan Xili ciyaareedkaan.
Kooxda kaliya ee Premier League guul gaartay sedax kulan oo isku xigta Waa Manchester City waxaana Sidaa Horey u sameeyay kooxda Chelsea sanadii 2010kab waxaana Ku hogaamiyay macalin Carlo Ancelotti.
Guul ay ka gaari karto Stoke ayaa la mid noqon doonta kooxda ugu fiican xilli ciyaareedka hada socda.
Manchester City Waxa Ay xilli ciyaareedkii 2011-12 oo ay ku badiyeen 7 guul iyo hal barbaro ah.
Maxaa U Gaara Stock City:
Mark Hughes 'macalinka Stock City ayaa soo gabagabeeyay shantii kulan ee ugu danbeysay ee tartamada oo dhan oo ay guul la'aan ahayeen,isagoo garaacday Southampton kulankoodii ugu dambeeyey.
Stock City Waxay doonayaan in ay diiwaangaliyaan guulaha isku xigta ee horyaalka markii ugu horeysay tan iyo bishii Jannaayo.
Stoke ayaa badisay kaliya hal jeer 11kii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League oo ay booqdeen Southampton bishii May.
Kooxda Lagu Nelaaneyso Potters ayaa ku guuldareystay inay shabaqa soo taabtaan 7 kulan oo ka mid ah 11 kulan oo ay ciyaareen.
Guushii ugu dambeysay ee Stoke ay kasoo gaarto kooxaha waaweynka Ee Preimer Leuge ah ayaa ay ka adkaadeen Manchester City Waan ciyaar dhacday bishii April sanadii 1972.
Saido Berahino ayaa ciyaaray 31 saacadood iyo 48 daqiiqo Premier League tan iyo markii uu goolkiisii ​​ugu dambeeyey ansixiyay waliba Waxaa baadi goobaa gool.
Shaxda Labada Naadi:
Manchester City: 4 3 3
E.Emoreas K.Walker J. Stones N.Otemend Danilo S.Silva Fernandinho K.Bruyne Sane Jesus Sterling.
Stock City: 4 5 1
J.Buntland Johnson Zouma Wimmer Pieters Diouf Shaqiri Cameron Flacher Rodriguez E M Choupe-Moting.